Taariikh Nololeedka Super Star-ka Door Walbo Sameyn Karo Ajay Devgan Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro) – Filimside.net
Taariikh Nololeedka Super Star-ka Door Walbo Sameyn Karo Ajay Devgan Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro)
April 2, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: April 2, 2018
Vishal Veeru Devgan waa atoore, director iyo qarash gareeye Hindi ah kaasi oo ka tirsan shirkada Bollywood-ka, wuxuu caan ka yahay in loogu yeero Ajay Devgan ama Ajay Devgn asigoo xarafka A magaciisa ka reebay si uu nasiibkiisa u wanaagsanaado.
Devgan wuxuu ka mid yahay atoorayaasha ugu caansan Bollywood-ka sidoo kalena 25-sano ee ugu dambeesay si joogto ah fanka kaga dhex muuqday.
Ajay wuxuu jilaayaasha kale kaga duwan yahay inuu door walbo sameyn karo taasina wuxuu ku muuteestay inuu abaal marino qaali ah ku guuleesto oo ay ka mid yihiin asigoo labo jeer ku guuleestay National Film Awards oo ay dawlada Hindiya bixiso.
Super Star-kan dadaalka badan waxaa aabo u ah Veeru Devgan oo ah ruug cadaa Bollywood-ka mudo dheer ka tirsanaa sidoo kalena sameen jiray Action-mada ama ficilada helista ee filimada lagu soo bandhigo ayuu curin jiray.
Laga soo bilaabo sanadii 1991 markii uu kusoo caan baxay filimkii Phool Aur Kaante ilaa haatan Ajay Devgan shaqo uusan qabanin ma lahana filim walbo ee uu xidigan jilo amaan xad dhaaf ah ayuu ku helaa wuxuuna leeyahay xirfad dabiici ah oo uu xidigaha kale dheer yahay.
Ajay Devgan waxaa u dhaxdo atirishada caanka ah ee lagu magacaabo Kajol ayadoo u heyso wiil iyo gabar waxayna nolosha wadaageen sanadii 1999 ilaa haatana waa qoys farxad ku wada nool.
Ajay Devgan iyo bilawgii noloshiisa:
2 April 1969 ayuu Ajay ku dhashay magaalada New Delhi, xidigan waa reer Punjab madaama aabihiis Veeru iyo hooyadiisa Veena ay Punjab kasoo jeedaan.
Ajay Devgan wuxuu wax kusoo bartay kana soo qalan jebiyay Silver Beach High School ee ku yaalo xaafada Juhi magaalada Mumbai.
Xidigan noloshiisa inta badan Mumbai ayuu ku qaatay madaama aabihiis Veeru Devgan uu Bollywood-ka ka tirsanaa sidoo kalena curin jiray ama sameyn jiray Action-mada halista ah ee filimada lagu soo bandhigo.
Ajay Devgan iyo aabihiis Veeru Devgan
Ajay walaalkiis waxaa lagu magacaabaa Anil Devgan waana filim qarash gareeye fanka ka tirsanaan jiray sidaa darteed xidigan qoyskiisa Bollywood-ka isaga ayay kaga soo horeeyeen.
Devgan asigoo aad u dhalin yar ayuu ka helay ku biiritaanka shirkada Bollywood-ka waxayna riyadiisa u rumowday sanadii 1985 asigoo wax ka jilay filimkii Pyari Behna waxaana filimkan wada jileen Mithun Chakraborty, Padmini Kolhapure, Vinod Mehra, Tanvi Azmi iyo Shakti Kapoor.
Ajay ayaa filimkan ku matalay doorka Mithun oo yar waxaana aad loo amaanay bandhigii uu filimkan Ajay ka sameeyay asigoo dhalin yar.
Soo Shaac Bixidii Ajay Devgan Iyo Nasiibkiisii Wacnaaa (1991-97)
Ajay Devgan hal mar ayuu magaciisa cirka galay waxaana ugu wacnaa in filimkiisii kowaad ee uu hogaamiye ka ahaa Phool Aur Kaante uu Super Hit noqday.
Devgan wuxuu Boxoffice-ka ku garaacay Anil Kapoor iyo Sridevi oo wateen filimkii Lamhe waxaana iska lahaa filimkan Yash Chopra.
Ajay ayaa Super Star-kan ku noqday kuna dul socday Anil Kapoor, Sridevi iyo Yash Chopra madaama Ajay filimkiisii Phool Aur Kaante uu guul taariikhi ah gaaray halka Lamhe uu Flop noqday!
Ajay muuqaalka uu filimka Phool Aur Kaante kusoo baxaayo oo ah inuu labo mooto labadiisa lugood kala saarto ayaa noqday muuqaalkii 90-kii ugu caansanaa waxaana loo aqoonsaday hogaamiyaha Action Hero!
Devgan filimka Phool Aur Kaante oo ay la jishay Madhoo wuxuu ku qaatay abaal marinta atooraha ugu wanaagsan ee Bollywood-ka ku cusub taasi oo ay shirkada Filmfare bixiso sanadii 1991.
Super Star-kan filimkiisii xigay isagana guul weyn ayuu gaaray waana Jigar (1992) kaasi oo noqday Hit weyn waxaana la jishay Karishma Kapoor weliba Ajay sida uu Action-ka ugu wacan yahay ayuu filimkan kusoo bandhigay.
Laakiin Devgan sanadii 1993 shaqadii uu qabtay inta badan kuma farxin madaama uu sameeyay ku dhawaad 8-filim balse badankooda wey guul dareesteen inkastoo isaga marwalbo bandhigiisa jiliin lagu amaanay.
Ajay Devgan soo laabo aan caadi ahayn ayuu sameeyay waxayna sanadii 1994 u ahayd sanad u qaas ah madaama xidigan uu sameeyya aflaan Classic oo guulo taariikhi ah gaareen sida Dilwale, Suhaag iyo Vijaypath.
Ajay cagaha ayuu dhulka la helay sidoo kalena wuxuu noqday atooraha kowaad ee filim sameeyayaasha baadi goobaan, laakiin xidigan waxaa lagu dhaliilay inuu aqbali jiray sheekooyin isku mid ah inta badan doorarka uu qaatay kuwo Action iyo aargudasho u badan ayay ahaan jireen.
Sanadii 1995 Ajay Devgan wuxuu la yimid 4-filim ee uu hogaamiye ka ahaa laakiin ma jirin filim u noqday Hit dhameestiran.
Filimka Naajayaz ee uu la jilay Juhi Chawla iyo Naseerudin Shah ayaa guul u gaaray kaasi oo Average noqday balse filimadii kale ee uu sameeyay 1995 wey guul dareesteen sida Hulchul, Gundaraj iyo Haqeeqat.
Ajay Devgan dadaalkiisa oo xad dhaaf ahaa iyo inuu yahay atoore door walbo sameyn karo ayuu marwalbo faciisa kaga fiicnaa sidaa darteed sanadii 1996 wuu soo rogaal celiyay wuxuuna la yimid labadii filim ee guulaha waa weyn gaareen Jaan (Hit) iyo Diljale (Semi Hit) laakiin filimkii Jung ee uu Mithun Chakraborty la jilay ayaa xidigan ka guul dareestay.
Ajay Devgan waxaa joogto u noqotay inuu sanad walbo filim weyn la imaado sidaa darteed sanadii 1997 wuxuu tijaabiyay doorkiisa dhanka shactirada asigoo Aamir Khan la jilay filimkii Ishq nasiib wanaag filimkan wuxuu noqday mid Super Hit ah oo aad loo amaanay sheekadiisa iyo qof walbo bandhigii uu sameeyay.
Devgan Iyo Marka Uu Bilaabay Inuu Awoodiisa Bollywood-ka Baahiyo (1998 – 2005)
Super Star-kan maqaamkiisii ugu sareeyay ayuu gaaray sanadii 1998 madaama filimkiisii Pyaar To Hona Hi Tha oo ay Kajol la jishay Super Hit noqday sidoo kalena filimkiisii kale Major Saab isagana guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray wuxuu noqday Semi Hit.
Laakiin guulaha filimadiisa waxaa kaga qiimo badneyd Ajay in sanadii 1998 abaal marinta National Film Awards uu ku guuleestay wuxuuna ku qaatay filimkii Zakhm oo ganacsi ahaan guul dareestay laakiin sheeko ahaan aad loola cajabay.
Devgan dabeecadaha lagu yaqaano Super Star-da ayuu joogteeyay taasi oo ah in ugu yaraan sanad walbo filim Hit Dhameestiran uu la imaado.
Sida darteed sanadii 1999 waxay u ahayd sanad isaga u qaas ah madaama 7-filim ee uu sameeyay 4-ka mid ah ay guulo waa weyn gaareen.
Dabcan filimada Hum Dil De Chuke Sanam iyo Kachche Dhaage waxay noqdeen Hit dhameestiran halka Hogi Pyar Ki Jeet uu Semi Hit noqday sidoo kalena Hindustan Ki Kasam isagana Average ayuu noqday laakiin sanadkan waxaa ka guul dareesteen filimada kala ah Dil Kya Kare, Gair iyo Thakshak.
Bilawgii qarnigan Ajay Devgan xaalkiisa ma fadhinin awoodiisana hoos ayay u dhacday, xidigan wuxuu tijaabiyay nasiibkiisa dhanka filim qarash gareynta asigoo maal galiyay filimkii Raju Chacha (2000) oo ay xaaskiisa Kajol la jishay laakiin filimkan qasaaro taariikhi ah ayu Ajay kala kulmay!
Sidoo kalena isla sanadii 2000 Super Star-kan waxaa dhulka ka galay filimkii Deewane ee uu labo Ajay ku matalay wuxuuna noqday filim guul dareestay (Flop).
Ka dooro dibi dhal ayay noqotay sheekada madaama sanadii 2001 uu Ajay Devgan la imaanin filim guuleestay wuxuuna sameeyay aflaantii daadka wada qaaday oo ay ka mid ahayeen Yeh Raaste Hain Pyaar Ke, Tera Mera Saath Rahen iyo Lajja.
Ajay Devgan wuxuu ku guuleestay sanadii 2002 markii labaad abaal marinta National Film Awards asigoo ku qaatay filimkii wadaniga ahaa The Legend Of Bhagat Singh sidoo kalena doorkiisii filimka Company abaal marino badan ayuu ku qaatay wuxuuna filimka Company noqday mid guuleestay (Average).
Weli abaal marinadii Devgan uu aruursaday sanadii 2002 ayaan ku dhex jirnaa sidoo kalen laadarka ugu wanaagsan ayuu ku qaatay filimkii Deewangee oo ilaa haatan lagu amaano wajigii uu xidigan kusoo bandhigay.
Devgan ayaa sanadii 2003 Boxoffice-ka gil gilay madaama filimkiisii Bhoot ee cabsida ahaa uu noqday Hit sidoo kalena filimada Qayamat iyo Gangaajal iyagana guulo fiican ayay gaareen waxayna noqdeen Avarega.
Muhiimada Ajay Devgan uu lahaa sanadii 2003 si wacan ayuu u gaaray madaama filimadiisa ay guulo gaareen sidoo kalena door walbo ee uu sameeyay uu ku helay amaan dheeri ah.
Sanadii 2004 Ajay Devgan hadal heynta Bollywood-ka ayuu la wareegay madaama filimkii weynaa Khakee uu laadar ka noqday sidoo kalena wuxuu ku helay amaan fara badan asigoo kaga jiliin wanaagsanaaday dhamaan xidigaihii la jileen filimkan oo ay ka mid ahaayeen Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai iyo Akshay Kumar wuxuuna Khakee noqday filim guuleestay (Average).
Sidoo kale isla sanadii 2004 filimkii shactirada badnaa Mast ayuu door wacan ka qaatay wuxuuna filimkan noqday Hit dhameestiran.
Super Star-kan sanadii 2005 waxay u ahayd sanad uusan jecleyn in dib loo soo xasuusiyo waayo filimo badan ayaa ka qasaareen oo ay ka mid yihiin Insan, Blackmail, Main Aisa Hi Hoon, Tango Charlie iyo Shikhar.
Laakiin sanadka wuxuu ku qatimay labo filim oo guuleesteen Kaal iyo Apaharan weliba filimka Apaharan Devgn wuxuu ka caawiyay inuu u tartamo abaal marinta atooraha ugu wanaagsan ee Filimfare iyo National Awards balse kuma guuleesanin.
Ajay Iyo Taxanihiisii Golmaal Marka Uu Bilaawday Iyo Sida Uu Wajiga U Badashay (2006 – 2009)
Waxaa wanaagsan dabeesha dhinaca ay u socoto inay doontaada u shiraacato waana sida uu sameeyay Ajay Devgan waayo xidigan wajiga ayuu badashay wuxuuna bilaabay sameynta filimada shactirada ah.
Sidaa darteed sanadii 2006 Ajay wuxuu sameeyay filimkii shactirada badnaa Golmaal – Fun Unlimited kaasi oo guul weyn gaaray wuxuuna noqday Hit sidoo kalea Golmaal wuxuu noqday filim Classic ah oo uu Ajay bilaabay inuu taxane ka dhigo sidoo kalena ay saaxibo ku noqdaan Rohit Shetty oo filimkan iska lahaa.
Sidoo kale sanadii 2006 Ajay wuxuu wax ka jilay filimkii fariinta adag xambaarsana Omkara inkastoo filimkan uu guul dareestay hadana xidigan amaan badan ayuu ku helay wuxuuna u tartamay bilado kala duwan.
Sanadii 2007 xidigan shaqo buuran ma qabanin laakiin labadii filim ee uu la yimid dhulka ayay galeen waana lagu qasaaray Cash iyo Ram Gopal Varma Ki Aag.
Ajay Devgan wuxuu dareemay in loolanka uu ku saa’iday sidoo kalena u baahan yahay filim Hit ah laakiin aflaantiisii xigeen ma sameyn wax guulo ah weyna guul dareesteen waxaana ka mid ah Halla Bol, Sunday, U Me Aur Hum iyo Mehbooba oo dhamaantooda sanadii 2008 soo baxeen.
Weliba filimkii U Me Aur Hum wuxuu ahaa filimkii ugu horeeyay ee uu Director ka noqday xaaskiisa Kajol ayaa la jishay inkastoo sheeko ahaan filimkan lasoo dhaweeyay hadana waa filim guul dareestay (Flop) oo lacagtiisa dib usoo celin waayay.
Ajay waa xariif iyo xeeladihiisa waa kuwo badan sidaa darteed saaxiibkiis Rohit Shetty ayuu dib ula midoobay waxayna la imaadeen filimka taxanaha Golmaal qaybtiisa labaad ee lagu magacaabo Golmaal Returns sidii laga filaayay filimkan shactirada ah aad ayaa looga helay wuxuuna gaaray guul weyn asigoo noqday Big Hit.
Super Star-kan hadana sanadii 2009 ma sameynin filim Hit dhameestiran noqday waayo filimkii London Dreams oo ay wada jileen isaga iyo Salman Khan waa mid guul dareestay (Flop) noqday laakiin sanadii isla sanadkan Ajay waxaa u guuleestay filimka All The Best – Fun Begins ee uu saaxiibkiis Rohit Shetty iska leeyahay wuxuuna noqday Average.
Super Star-kii Soo Rogaal Celi 2010 Ilaa Haatan Looma Dhawaan karo Devgan:
Hoos u dhac walbo oo xidigan qabsaday marnaba calankiisa ma dhicin sidaa darteed dadaalkiisa ayuu ku muteestay xiligan oo loolanka Bollywood-ka aad u sareeyo inuu maqaam sare ka taagnaado ha u maleyn Sedexda Khans iyo Akshay Kumar oo kaliya inay 25-sano Bollywood-ka ka dhex muuqdeen Devgan-na kama liito oo cagta ayuu cagta u saaray.
Sida darteed Super Star-kan sanadii 2010 wuxuu la yimid sedex filim oo guulo taariikhi ah gaareen Raajneeti (Super Hit), Once Upon a Time in Mumbaai (Hit) iyo Golmaal 3 (Blockbuster) sidoo kalena filimkiisii kale Atithi Tum Kab Jaoge isagana guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray.
Ajay guusha ayuu saaxiib la noqday sidoo kalena sanadii 2011 wuxuu la yimid filimkii wacnaa ee Action-ka ahaa Singham kaasi oo Super Hit noqday wuxuuna Ajay dib usoo ceshtay darajadiisii Action Hero.
Xidigan xaalka Bollywood ayuu fahmay marna Action ayuu sameeyaa marna shactiro wuxuuna 2012 la yimid filimkii shactirada badaa Bol Bachchan oo ay Abhishek Bachchan isla jileen wuxuuna filimkan gaaray guul weyn asigoo noqday Hit dhameestiran.
Sidoo kalena filimkii Son Of Sardaar isagana 2012 soo baxay wuxuu noqday Hit weyn taasi oo Ajay ka caawisay inuu sii adkeesto booskiisa Super Star-nimo.
Super Star-kan sanadii 2013 uma ahayn sanad wanaagsan waayo labadiisii filim wey guul dareesteen Himmatwala iyo Satyagraha taasi oo ka dhigtay in xidigan guul dhan uusan arkin sanadkan.
Devgan wuu soo laabtay wuxuuna la yimid 2014 taxanaha Singham qaybtiisa labaad ee Singham Returns wuxuuna filimkan noqday Super Hit weliba xidigan doorkiisa Bajirao Singham wuxuu noqday mid Classic ah oo si guud loogu sacabo tumo.
Dhamaadkii 2014 Ajay Devgan wuxuu la yimid filimkii lacagaha fara badnaa lagu qarash gareeyay Action Jackson ee uu iska lahaa Prabhu Deva laakiin mashruucan siweyn ayaa loogu fashilmay wuxuuna noqday filimkan mid guul dareestay.
Ajay Devgan sanadki 2015 hal filim ayuu sameeyay waana filimka sheekadiisa aadka loola wada dhacay Drishyam, filimkan guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray (Average) laakiin Devgan iyo sida daacadnimada ku dheehan ee uu filimkan u matalay ayaan marnaba la iloobi karin!
Ajay sanadkii 2016 waxuu la yimid filmki Shivaay e uu Director-ka ahaa sido kalena qarash gareye ayuu ka aha balse Ajay mashruucan wuu ka guuldarestay.
Ajay oo aan niyad jabin aya sanadkii 2017 la yimid labo film kuwaaso kala aha Baadshaho iyo Golmaal Again sida muuqatay Baadshaho waxuu noqday mashruuc guuldarestay balse taxanihiisa Golmaal qeybtisa 4aad ee Golmaal Again ayaa guul taariikhi ah u gaara asigo noqday Blockbuster weyn.
Devgan guushisa iyo maqaamkisa ayuu soo ceshtay sida awged sanadkaan 2018 waxuu la yimid Raid oo tiyaatarada usaaran waxaana muuqata inuu mashruucan Hit dhamestiran noqon doono inkastoo uu hader yahay mashruuc guulestay.
Ajay Devgan Labo Arin Ayuu Ku Amaanan Yahay:
Xidigan xaalad walbo oo soo martay ma quusanin sidaa darteed 25-sano ee ugu dambeesay dadaal xad dhaaf ah ayuu sameeyay loolan walbana wuu kasoo gudbay.
Sidaa darteed Ajay Devgan wuxuu sameeyay 21-filim oo Hit dhameestiran noqdeen kaliya Akshay Kumar, Shah Rukh Khan iyo Salman Khan ayaa xidigan ka Hit badan!
Sidoo kale Ajay Devgan waa atoore door walbo lagu amaanay wuxuuna ku guuleestay 32-biladood oo kala duwan taasi oo muujineyso in xirfadiisa ay aad u sareyso.
Abaal marinta Filmfare Awards wuxu ku guuleestey sedex biladood oo kala duwan:
Sido kale atooraha ugu wanaagsan ee Filmfare bixiso wuxuu u tartamay 7-jeer oo kala duwan:
2012 – Filmfare Award for Best Actor for Singham
Ajay Devgan Devgan Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Xidigan waxaa u dhaxday oo xaaskiisa ah Kajol Devgan oo ay is guursadeen 24 Febraayo sanadii 1999 waxayna haatan isku dhaleen gabar iyo wiil weliba gabadhooda Nyasa waxay dhalatay 2003 halka wiilkooda Yog uu dhashay 2010.
Ajay Devgan iyo Kajol sanadii 1994 ayay isku barteen filimkii Hulchul ayagoo wada duubayeen mudo 5-sano ah markii ay saaxiibo ahaayeen ayay is guursadeen waxayna labadan xidig ka mid yihiin lamaanayaasha Bollywood-ka ugu awooda badan.
Ajay Devgan waa atoorihi ugu horeeyay ee Bollywood-ka ka tirsan kaasi oo iibsado diyaarad nooca raaxada ah kaasi oo 6-qof qaadi karto inkastoo arinkaan uu ku beeniyay wareysi goor dhow laga qaaday.
Waxaa Aqrisay 2,645